FAA dia nanambara vola mitentina 76 tapitrisa dolara amin'ny fanatsarana ny seranam-piaramanidina
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » FAA dia nanambara vola mitentina 76 tapitrisa dolara amin'ny fanatsarana ny seranam-piaramanidina
Sekreteran'ny fitaterana amerikana Pete Buttigieg
Ny fanavaozana ny fotodrafitrasa ho an'ny firenena no laharam-pahamehana indrindra amin'ny fandaharam-potoanan'ny filoham-pirenena Biden, ary ny programa fanatsarana ny seranam-piaramanidina dia mamela ny seranam-piaramanidina manerana ny firenena hanavao sy hanatsara ny fiarovana ny toerana misy azy ireo.
Fanomezana telo ho an'ny tetikasa fotodrafitrasa amin'ny alàlan'ny programa fanatsarana ny seranam-piaramanidina FAA FY2021 no nambara
Ny vola fanampiana dia hanome $ 76 tapitrisa ho an'ny Chicago O'Hare International, Dallas-Fort Worth International ary Fort Lauderdale / Hollywood International Airport
Ireo seranam-piaramanidina telo dia mahazo vola araka ny fehezan-dalàna avy amin'ny Letters of Intent navoakan'ny FAA teo aloha, manolo-tena amin'ny fandaharam-potoana famatsiam-bola naparitaka nandritra ny taona maro.
Ny departemantan'ny fitaterana amerikana androany dia nanambara fanampiana telo ho an'ny tetikasa fotodrafitrasa amin'ny alàlan'ny Fitondrana federaly federaly (FAA) Fandaharana fanatsarana ny seranam-piaramanidina FY2021. Ny fanomezana, ny voalohany amin'ny $ 3.2 miliara amin'ny famatsiam-bola azo alaina amin'ity programa ity isan-taona, dia hanome vola mitentina $ 76 tapitrisa ho an'ny Chicago O'Hare International, Dallas-Fort Worth International ary Fort Lauderdale / Hollywood International Airport.
"Ny fanavaozana ny fotodrafitrasa ho an'ny firenentsika dia laharam-pahamehana ho an'ny fandaharan'asan'ny filoha Biden, ary ny programa fanatsarana ny seranam-piara-manidina dia mamela ny seranam-piaramanidina manerana ny firenena hanavao sy hanatsara ny fiarovana ny toerana misy azy ireo," hoy ny sekreteran'ny fitaterana amerikana Pete Buttigieg. “Ireo fanatsarana ireo — amin'ny seranam-piaramanidina rezivezy indrindra ao amin'ny firenentsika — dia hanompo ny vondrom-piarahamonintsika sy ny besinimaro rehefa manomboka manangana ny firenentsika tsara kokoa isika.”
Ireo seranam-piaramanidina telo dia mahazo vola araka ny fehezan-dalàna avy amin'ny Letters of Intent navoakan'ny FAA teo aloha, manolo-tena amin'ny fandaharam-potoana famatsiam-bola naparitaka nandritra ny taona maro. Ny mari-pankasitrahana dia misy:
Chicago O'Hare International dia hahazo $ 25 tapitrisa hanonerana ny seranam-piaramanidina ho an'ny dingana fanamboarana ny Runway 9C / 27C izay misy ny kojakoja amin'ny tranokala, ny naoty ary ny asa vita amin'ny lampivato. Runway 9C / 27C dia notendrena tamin'ny 5 Novambra 2020.
Dallas-Fort Worth International dia hahazo $ 31 tapitrisa hanamboarana 10,200 metatra amin'ny tendrony avaratra atsinanana manodidina ny rafitra taxiway mba hialana amin'ny filan'ny fiaramanidina hiampitana ireo lalamby mavitrika. Ny làlana hetra dia antenaina ho vita amin'ny volana septambra 2025.
Fort Lauderdale / Hollywood International dia hahazo $ 20 tapitrisa hamerenana ny seranam-piaramanidina amin'ny fanitarana ny Runway 10R / 28L ka hatramin'ny 8,000 metatra. Ny fanitarana dia mamela ny habetsan'ny serivisy avo lenta ary mampihena ny fahatarana amin'ny fifamoivoizana misy. Ny extension Runway 10R / 28L dia vita ary notendrena tamin'ny 18 septambra 2014, ary ny fanatsarana rehetra mifandraika amin'izany dia vita tamin'ny septambra 2015.
"Ny tetik'asa seranam-piaramanidina tsirairay avy dia manome tombony ho an'ny National Airspace System amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny fiarovana sy ny fahaiza-manao," hoy ny Administrator an'ny FAA, Steve Dickson. "Amin'ny maha-mpanamory fiaramanidina teo aloha ahy, azoko atao ny manamarina fa ny tantsambo dia tompoina tsara indrindra raha ny rafitra no mitantana ny fangatahana nefa tsy misy fahatarana tsy ilaina."
Ny Programme Fanatsarana ny Seranam-piaramanidina dia manome tetikasa fotodrafitrasa ho an'ny seranam-piaramanidina toy ny lalamby, zotram-pitandremana, ny mari-pamantarana ny seranam-piaramanidina, ny jiro amin'ny seranam-piaramanidina ary ny marika amin'ny seranam-piaramanidina. Isan-taona, ny programa fanomezana dia vatsian'ny $ 3.2 miliara eo ho eo. Ireo no fanomezana telo voalohany amin'ny fanampiana mihoatra ny 1,500 ho an'ny seranam-piaramanidina amerikana an-jatony izay havoakan'ny FAA amin'ity taona ity.